J/Land -“Kisima”-Jawiga-Magaalada Oo Ka-Beddelmay Sidii-Hore & Ciidamo Tiro Badan Oo La-Soo Dhoobay… Iyo Wasiirrada….. D/Dhexe Qaar-Ay!!….Warbixin… | Allkisima.com
Kismaayo:-(Allkisima)_Magaaladda Kismaayo ayaa gashay xaalad cusub xilli sacaadihii lasoo dhaafay ay kusii qul-qulayeen wasiirrada D/DHEXE ee FEDERAALKA.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in ku dhawaad shan diyaarad oo sida shaqaalo katirsan xafiiska R/Wasaaraha iyo golihiisa wasiirrada ay tageen soo gaareen magaalada Kismaayo , halkaas oo La sheegay in uu ku qabsoomi doono shirka golaha wasiirrada.
Dhanka kale waxaa jira warar sheegaya in diyaaradaha yimi kismaayo in inta badan saarnaayeen ciidamo katirsan DF-SOMALIA,kuwaas oo loogu tala-galay iney sugaan amMaanta xukumadda Xilliga ay ku shirayaan magaaladda Kismaayo.
Dhinaca kale Ra’isul wasaare ku xigeenka dowladda Soomaaliya ayaa hoggaamin doona wasiirrada ugu badan ee tagaya magaaladda Kismaayo, halka R/W kheyre isna Kismaayo laga sugayo.
Talaabadan ah in Kismaayo lagu qabto shirka golaha wasiirrada ayaa timid ka-dib baaq uu horey ujeediyay maamulaha degmada Kismaayo Mr-Axmed Madoobe.
Waxaa kale oo xusid mudan in Ammaanka Kismaayo aad loo adkeeyay, waxaana ciidamada dowladda ee Muqdisho ka yimi iyo kuwa kismaayo ay bilaaben iney howl-gallo gaar ah ka sameeyaan-Magaalada Kismaayo.
Ugu dambeyntina waxaa xusid mudan in tahay markii ugu horreysay oo meel ka baxsan Muqdisho lagu qabto shirka golaha wasiirrada DF-SOMALIA ,arrinkaasoo dadka siyaasadda guud ee-SOMALIA La socda ay ku macneeyeen mid aanan waxba soo kordhin doonin.